के हो सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त (Theory of General Relativity) ? ~ विज्ञान संसार
के हो सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त (Theory of General Relativity) ?
Posted by Om Bhandari On 5:43 AM
सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त जर्मन भौतिकशास्त्री अल्बर्ट आइन्सटाइन (Albert Einstein) ले सन् १९१५ मा प्रतिपादन गरेका हुन । यो सिद्धान्त विशेष सापेक्षताको सिद्धान्तको जगमा अडिएको छ । यस सिद्धान्तले मुख्यरूपमा गुरूत्वकर्षणको नियम र प्रकृतिका अन्य बलहरूसंगको यसका सम्बन्धहरूको व्याख्या गर्छ । यस सिद्धान्तलाई निम्नलिखित मुख्य पाँच कुराहरूमा केन्द्रित गर्नसकिन्छ :
(क) अन्तरिक्ष तथा अन्तरिक्ष-समय पहिले विश्वास गरिएझै चेप्टो नभई यो घुमाउरो (Curved or Warped) छ ।
(ख) न्युटनले भनेजस्तै ग्रहहरू गुरूत्वाकर्षणको कारणले घुमाउरो कक्ष (Orbit) मा रही घुमिरहेको नभई घुमाउरो अन्तरिक्षमा सबभन्दा छोटो सोझो बाटोलाई पछ्याउदै जाँदा सूर्यलाई घुम्न पुगेका हुन् ।
(ग) अन्तरिक्षमा कुनै पनि पिण्डले जहिले पनि चौआयामिक अन्तरिक्ष-समय (Four Dimensional Space-Time) मा सोझो बाटो नै पछ्याएको हुन्छ ।
(घ) सूर्य जस्तो ठूलो पिण्डको गुरूत्वाकर्षणको क्षेत्रमा प्रकाश बाङ्गिन पुग्छ । यो कुरालाई सन् १९१९ को खग्रास सूर्यग्रहणको समयमा सूर्य नजिक देखिएका ताराहरुको अवलोकनबाट बेलायती वैज्ञानिकहरुले पुष्टि गरेका छन ।
(ङ) कम गतिमा रहँदाभन्दा बढी गतिमा रहँदा समय ढिलो चल्छ । अर्थात्, दर्शकको गतिअनुसार समय ढिलो वा चाँडो चल्ने हुन्छ ।
Categories: अन्तरिक्ष, सिद्धान्त
के हो सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त (Theory of Gen...